Qarabaan attamiin gatii waan biraatiif baafnu jijjiire? - BBC News Afaan Oromoo
Qarabaan attamiin gatii waan biraatiif baafnu jijjiire?
Maashina maxxansaa (piriintara) keetiif qabee qalamaa bittee kan beektu yoo ta'e, gatiin isaa kan pirintaricha ittiin bitteen waan walitti dhiyaatuuf artee ta'u mala.
Kuni sababii yaada ka'umsaa dhugumatti daldala addunyaa geeddaree dha. Kunis nama Korporeeshinii Jileet (Gillette) hundeesse, Kingi Kaamp Jileet irraa dhufe. Innis meeshaa qarabaan keessa galuun ittiiin haaduuf fayyaduu fi kan boodarra gatamu dha. Qarabaan Jileet adeemsa gosa daldalaa sirna dinagdee ammayyaa keessatti baay'ee babal'ateera. Adeemsi sunis madaalli gatii garee-lamaa (two-part pricing) jedhama.
Innis haala akkanaatiin hojjata. Fakeenyaaf pirintarii fi qabee qalamaa akka fakkeenyaatti fudhadhu. Piriintariin meeshaa guddaa fi tekinooloojii walxaxaa qabu, garuu gatiinsaa kan baay'ee qaalii hin taanee dha. Haa ta'u malee gatiin qabee qalama isaa garuu qaalii dha.
Kunis maamilatti gaaffii ta'uu mala. Garuu omishtootaaf pirintara gatii bushaa, qabee qalamaa ammoo gatii qaaliitti gurguruun adeemsa daldalaa hiikkaa qabuu dha.
Filannoon maamiltootaaf jiru maaliidha? Piriintarii haarawaa gutuu omishtoota biroo irraa bitachuu? Kun ammoo piriintara duraaniitti qalama guutuu caalaa qaalii waan ta'eef, osoo hin jaalatiin qalama bituuf dirqamta.
Goodayyaa suuraa Kingi Kaamp Jilleet
Akkasumas adeemsi daldalaa madaalli gatii garee-lamaa jedhamus akka qarabaa fi qabduu qarabaatti (razor and blades) beekama. Sababiin isaas qabduu qarabaa yookin meeshaa ittiin haadamu gatii gadaanaan gurguruun qalbii namootaa harkiisuudhaan, garuu bittaan qarabaa jijjiirraa ammoo irra deebiin gatii cimaa isaan baasiisa.
Duraan qabduun qarabaa Kiing Kamp Jileet hangi isaa guddaa fi qarabaan isaas yabbuu waan tureefu, yoo doomutti darbatamee kan biraa bitama osoo hin taane waan qaramuuf gatiin bittaa isaa gahaa ture.
Jileetis osoo qarabaadhaaf qabduu bareedaa omisheefii, qarabaa caalaa haphii fi rakasaa dafee jijjiiramu omishuu akka danda'u hubate.
Innis yaada adeemsa daldalaa maddaallii gatii garee-lamaa battalumaan bira hingeenye. Jalqaba irratti gatii garee lamaanuu baayyee qaalii taasisee.
Gatiin qarabaa Jileet dolaara shan (gara qarshii 115) ykn jiddu galaan mindaa torban harka sadii keessa tokkoo kan ta'uu dha.
Modeeliin qabduu qarabaa rakasaa fi qarabaa qaalii booda keessa wayita dorgoomtoonni biroo oomisha eegalanitti kan dhufee dha.
Meeshaa Pileey Isteeshinii 4 fudhadhaa.
Goodayyaa suuraa Pilee Isteeshinii Soonii 4
Sooniin wayita meeshaa kana tokko gurguru maallaqa dhaba. Kunis gatiin gurgurtaa gatii oomishaa fi raabsaa waan caaluufii dha. Ta'us, sababii namni meeshaa Pileey Isteeshinii 4 qabu, wayita tapha(Game) bitu Sooniin qarshii argatuufuu omaa miti.
Akkuma beekamu, moodeeliin akkasii kun akka hojjatuuf, maamiltoonni qabduu qarabaa tokkootti qarabaa rakasaa kan biroo akka hin galchineef ittisuuf malli ittiin dhorkitu wayii jiraachu qabaata.
Falli tokko ammoo seera qabeessuummaadha: ragaan mirga-uumee qarabaawwan kee ni eega. Garuu ragaan kunis kan yeroo hundaaf turu hin ta'u.
Warri kaanis fala gara biraa barbaadaa jiru: teeknoolojiitti dhimma bahuun taphoonni gara biraa akka Pileey Isteeshiinii irratti hin hojjannee fi qabeen qalamaa beekamtii hin qabaannes akka piriintarii muraasa keessatti hin hojjanne mirkanneessuu dha.
Modeeliiwwan madaalli gatii garee lamaa kunis kan hojjatuuf, karaa oggeessoonni dinagdee ''baasii dabarsuu'' jedhaniin yoo hojiirra olfamee dha.
Baasii dabarsuu jechuun maallaqa ta'u hin qabaatu. Isaanis gama sa'aatii ykn bu'aa bahii hir'isuutiin dhufuu danda'u.
Osoon ani softiweerii 'Adobe photoshop' duraan kanan beeku ta'ee, rakasaan kanan ittiin baru bitachuurra kanan ittiin caalaa cimsadhun gatii qaaliin bitachuu filadha ta'a.
Kanaaf egaa, daldaltoonni softiweerii kan yaalii bilisaa namootaaf kennaniif. Akkasumas baankiiwwanii fi dhaabbileenis gatii dhiheessiitii adda dhiyeessuun namoota kan harkisaniif. Yoo callisuun gatii olkaasanis geeddaruuf baay'ee hin cinqaman ta'a.
Maddaalliin gatii garee lamaa baay'ee bu'a qabeessa waan hin taaneef, oggeessonni diinagdee maaliif maamiltoonni akka jaalatan hin hubatan. Tarii ibsi isaan kennanis waan jalaa wal dhahameefii dha kan jedhu ta'a.
Garuu boodarra caalaa akka gatii olaanaa kanfalan hubachuu dadhabuun, ykn ammoo dursaanii hubatanii yaaduun gatii gaarii filachuun itti cime ta'u mala.